Frank Lampard Oo Weerar Ku Qaaday Bruno Fernandes Ka Hor
Tababaraha Chelsea ee Frank Lampard ayaa weerar ku qaaday xiddiga khadka dhexe ee Manchester United ee Bruno Fernandes ka hor ciyaarta semi-finalka FA Cup ee ay Blues iyo Red Devils ku ballsan yihiin Axadda.
TOBANKA Kooxood Ee Bixiya Mushaharka Ugu Badan Oo Lasoo
Xiddigaha Waaweyn Ee Bilaashka Ah – Messi, Alaba,
Frank Lampard waxa uu uga digay difaaca kooxdiisa farsamooyinka khiyaamadu ku ladhan tahay ee xiddiga reer Portugal, waxaanu sidoo kale farta ku fiiqay murannadii ka dhashay VAR ee uu Burno Fernandes ku lugta lahaa bishii ugu dambaysay.
Tababaraha Chelsea waxa uu rumaysan yahay in go’aamo madmadow ku jiro ay Manchester United ka caawiyeen inay sare ugu soo dallacdo oo ay kaalinta afraad ee horyaalka Premier League ku qabsato Leicester City oo ay isku dhibco yihiin, balse ay Foxes farqiga goolasha kaga horreyso.
Lampard oo warbaahinta la hadlay ka hor ciyaartan muhiimka ah, waxa uu yidhi: “Difaaca Chelsea waa inay taxadar dheeraad ah muujiyaan, sababtoo ah, waxay waajahayaan ciyaartooyo heerkoodu sarreeyo, tayo iyo xawaare leh oo Manchester United afka hore uga ciyaaraya, si degdeg ahna u dhaqaaqaya, markaa waa inaad lugtaada fududayso oo aanad isku tuurin iyaga.”
Frank Lampard waxa uu ku dooday in Fernandes uu yahay ciyaartoy tayo sarraysa leh oo xariif ah, laakiin uu khiyaamooyin badan sameeyo, isna tuuro si rikoodhe loogu dhigo, waxaanu yidhi: “Waxaad u baahan tahay inaad fahanto tayooyinka cidda aad ka hor tegayso, sida ciyaartoyda noocaas ah. Fernandes wuxuu xariif ku yahay dhaqdhaqaaqiisa. Waxaynu ku aragnay Aston Villa oo uu sameeyey oo rikoodhe la siiyey iyadoo aanay rikoodhe ahayn.”
Waxa kale oo uu tababaraha Lampard ka hadlay go’aamadii uu qaatay garsoorihii dhexdhexaadinayay ciyaartii Manchester United ay 2-0 kaga badisay Khamiistii Crystal Palace, waxaanu yidhi: “Wayaabaha wareerka ah ee dhacay dhowaanahan, waxa ka mid ah midkii habeenkii Khamiistii. Wuxuu ahaa mid aad iyo caad caddaan u ah iyo go’aanka oo gebi ahaantiiba ahaa mid qaldan oo aan xataa dib loo eegin ama aan la beddelin.”
Ugu dambayntii waxa uu usoo jeediyey VAR inay madaxa sare u qaadaan oo ay eegaan waxyaabaha xaqiiqada ah ee garoonka ka dhacaya, go’aamada saxda ahna ay ku dhaqaaqaan.